नेपाली सेनाको १५० अधिकृत क्याडेट पदमा भर्ना खुल्यो - नेपालबहस
नेपाली सेनाको १५० अधिकृत क्याडेट पदमा भर्ना खुल्यो
| ९:५९:०७ मा प्रकाशित
२३ माघ काठमाडौं । के तपाई नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदमा भर्ना हुन चाहानु हुन्छ ? यदि चाहानु हुन्छ भने ढुक्क हुनुस ! नेपाली सेनाले अधिकृत क्याडेट पदमा लागि भर्ना आह्वान गरेको छ ।
बिहीबार नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभागले एक विज्ञापन प्रकाशित गर्दै खुला र समावेशीतर्फ कुल १५० सिटका लागि भर्ना आह्वान गरेको हो । नेपाली सेनाले यहि माघ २३ गतेदेखि आगामी फागुन ८ गतेसम्म दरखास्त दिन इच्छुक व्यक्तिहरूलाई आग्रह गरेको छ । उम्मेदवारहरूको उमेर हद भने शैक्षिक योग्यताअनुरूप तोकिएको छ ।
विज्ञापन प्रकाशित सुचनाका अनुसार, २१ वर्ष ननाघेका प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण र २४ वर्ष ननाघेका स्नातक उत्तीर्णले दरखास्त दिन सक्नेछन् । सैनिक सेवामै रहेका २६ वर्ष उमेर पार नगरेकाले पनि अधिकृत क्याडेटमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।
पेट्रोलमा तारपिन तेल मिसाउने चालक पक्राउ ३० मिनेट पहिले